AmaShishini amaNcinci aSebenzisa njani iSoftware ukuLawula abafowunelwa | Martech Zone
NgeCawa, nge-1 kaJanuwari 2012 NgeCawa, nge-1 kaJanuwari 2012 UNick Carter
Ngaphezulu kwama-90% amashishini amancinci asebenzisa uhlobo oluthile lwedatha yolawulo lwedatha ukugcina abafowunelwa, kubonakala ngathi amashishini amancinci angene kwixesha ledijithali. Kodwa, besifuna ukwazi ukuba yintoni le ayenzayo amashishini amancinci ngedatha yokunxibelelana. Oko sikufumanisileyo kunokukothusa. Unokufumana iziphumo zovavanyo olupheleleyo kwifayile ye- IdilesiIyunivesithi ezimbini.
I-Viralheat: UkuJongwa kweendaba kwezeNtlalontle zee-SMB